Shina ambongadiny Krismasy Style Glass Rig Bong mifoka rano fantsona vaovao rano sodina recycler Bong Manufacture sy Factory |CANNABIZ
Fitaovana mifoka sigara
Ambongadiny Krismasy Style Glass Rig Bong Mifoka rano Sodina New Water sodina mpanodina Bong
Mpividy ara-barotra: Fivarotana manokana Fitaovana: fitaratra, fitaratra
Toerana niaviany: Hebei, China Laharana modely: CH-041
Anaran'ny vokatra: Glass Bong Loko: Black/Blue/Customized
Fonosana: Kitapo miboiboika Lanja: 0.45kg
Habe: 25cm MOQ: 100pcs
logo: logo manokana maimaim-poana
Tonga ny vilia baolina 14mm ary miparitaka ambany
50 hatramin'ny 499:12.7USD
500 hatramin'ny 4999: 11,9 USD
5000 sy mihoatra: 11.2USD
Sample: Afaka manome anao santionany namboarina izahay mandra-pahafa-po anao
Fampahafantarana momba ny fandefasana:
Fotoana fitarihana: 3 - 30 andro
Habe isaky ny singa: 50 × 25 × 25 santimetatra
Lanja isaky ny Unit: 2 Kilograma
Units isaky ny baoritra fanondranana: 15
Ny haben'ny baoritra fanondranana L / W / H: 60 × 50 × 45 santimetatra
Lanja baoritra fanondranana:
Q1.Afaka manana baiko santionany amin'ny vokatra ve aho?
A: Eny, mandray ny baiko santionany izahay mba hitsapana sy hanamarina ny kalitao.Santionany mifangaro dia azo ekena.
Q2.Ahoana ny amin'ny fotoana hitarika?
A: Sample mila 3-5 andro, ny famokarana faobe ny fotoana mila 1-2 herinandro ho an'ny baiko be mihoatra ny
Q3.Manana fetra MOQ ho an'ny vokatra ve ianao?
A: Low MOQ, 1pc ho an'ny santionany fanamarinana dia misy
Q4.Ahoana no hanohizana ny baiko ho an'ny vokatra?
A: Ampahafantaro anay aloha ny zavatra takinao na ny fampiharanao.
Faharoa, mitanisa araka ny zavatra takinao na ny soso-kevitray izahay.
Fahatelo ny mpanjifa dia manamafy ny santionany sy ny toerana fametrahana ny filaminana ara-dalàna.
Fahefatra Mandamina ny famokarana izahay.
Q5.Mety ve ny manonta ny logo-ko amin'ny vokatra l?
A: Eny.Azafady ampahafantaro anay amin'ny fomba ofisialy alohan'ny famokarana ary hamafiso ny famolavolana voalohany mifototra amin'ny santionay.
Q6: Inona no azonao vidiana aminay?
A: bongs vera vera, fantsona rano vera, percolator fitaratra, fantson-drano vera, fitaovana mifoka sigara toy ny quartz banger, vilia baolina, ambany, satroka karba.
Q7: Manome antoka ho an'ny vokatra ve ianao?
Q8: Nahoana ianao no tokony hividy aminay fa tsy amin'ny mpamatsy hafa?
A: Mazoto amin'ny serivisy mpanjifa izahay.Ny fanontaniana rehetra dia hovaliana ao anatin'ny 12 ora.Manome vahaolana tokana ho an'ny mpanjifa izahay.Manolo-tena amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ary ny fanavaozana ny vokatra izahay.Miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso kalitao manara-penitra iraisam-pirenena, ny vokatray dia vita amin'ny fomba mendrika sy tonga lafatra.
Q9: Ahoana no ahazoanao antoka fa tsy ho simba ny peoduct mandritra ny fitaterana?
A: Ny vokatray dia amboarina ao anaty kitapo miendrika telo sosona na ao anaty fonosana baoritra tsirairay, ary ny entana tsirairay dia entina amin'ny alàlan'ny pallet plastika mba hahazoana antoka fa tsy hisy fitaterana manararaotra.
Q10: Afaka mamolavola sy mamokatra vokatra vaovao ho antsika ve ianao?
A: Eny, afaka mamolavola vokatra vaovao ho anao izahay, mila milaza aminay ny hevitrao ianao, hanampy anao hahatsapa izany izahay, ary hanao sonia fifanarahana tsiambaratelo miaraka aminao izahay mba hahazoana antoka fa tsy ho tafaporitsaka ny mombamomba ny vokatrao.
Q11: Inona no tokony hataoko raha mahazo ny entana aho ary mahita fa misy vokatra simba na simba?
A: Ny vokatray dia amboarina ao anaty kitapo telo sosona na ao anaty baoritra tsirairay, ary ny entana tsirairay dia entina amin'ny alàlan'ny pallet plastika mba hahazoana antoka fa tsy hisy fitateram-bahoaka:
Aorian'ny fanamarinanao ny isan'ny vokatra simba dia lazao aminay amin'ny alàlan'ny sary na horonan-tsary, ary havoakanay ho anao ireo vokatra simba.
Aorian'ny fanamarinanao ny isan'ny vokatra simba dia lazao aminay amin'ny alàlan'ny sary na horonan-tsary, ary avy eo ny totalin'ireo vokatra simba dia hesorina amin'ny baiko manaraka.
Aorian'ny kajy ny isan'ny vokatra simba dia haverinay mivantana aminao ny fandoavam-bola mifanaraka amin'izany.
Q12: Inona ny fomba fandoavanao?
A: Fepetra fanaterana flexible: EXW, FOB, CIF, DAP, DDU;
Vola fandoavana maro: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY;
Amin'ny ankapobeny dia manao fifampiraharahana amin'ny T/T sy paypal izahay.Raha mahatsiaro ho tsy azo antoka ianao dia afaka manao fifampiraharahana amin'ny alàlan'ny sehatra hafa toa an'i Alibaba ihany koa izahay.
teo aloha: Ambongadiny avo-tsara fitaratra Rig Bong fitaratra rano fantsona fitaratra fitaratra Bong amin'ny Custom Logo
Manaraka: Ambongadiny Sandblast avo lenta sy Plating Glass Rig Bong Glass Water Pipe Glass Recycler Bong
Color Spray Glass Bong
Bong fitaratra miloko
Designer Glass Bongs
Bong fitaratra ho an'ny ahidratsy mifoka sigara
Fitaratra fifohana sigara
Perc Glass Oil Rig
Bong fitaratra volomparasy
Pyrex Glass Water Pipes
Glass Bong kely
Beaker ambany efamira bong
Ambongadiny avo lenta Sandblast sy Plating Gl...
HAZO DOUBLE PERC TRAIGHT TUBE RANO PIPE
Bong mpanodina 30cm misy fantsona misy kofehy sy tantely...
Fitaratra rano fantsona Shisha Hookah fitaratra sigara Pi...
Vaovao farany momba ny orinasa
Ny basy fifohana sigara dia manatsara ny tsiron'ny fiainana
Rig bong pipe mifoka sigara salama
Raha mila izany ianao dia mifandraisa aminay ara-potoana
Mifandraisa amin'ny Internet
Dasun Village, Hejian City, Hebei, Sina